जाडोमा किन हाडजोर्नीको दुखाइ बढ्छ ? यी हुन् समाधानका उपायहरु Canada Nepal
जाडोमा किन हाडजोर्नीको दुखाइ बढ्छ ? यी हुन् समाधानका उपायहरु
काठमाडौँ। जाडो मौसममा हाडजोर्नी दुख्ने समस्या बढ्ने गर्छ । सामान्यतया जाडो मौसमको सुरुवातसँगै यस्तो समस्या वृद्धवृद्धाले भोग्ने गर्छन् । यो पीडा वा दुखाइ प्रायः बाथ रोग अर्थात् आर्थिराइटिजसँग सम्बन्धित छ। हाडजोर्नी र मांशपेशी दुख्ने समस्या बाथ रोग अर्थात् आर्थिराइटिजसँग मात्र सम्बन्धित् नभएर यसका अन्य सम्भावित कारणहरू पनि छन्। जसले वृद्धवृद्धालाई मात्र नभएर विभिन्न उमेर समूहका मानिसहरुलाई पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ। यसले दैनिक क्रियाकलापहरू प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्ने क्षमतालाई पनि असर गर्न सक्छ।
आखिर जाडोमा किन हाडजोर्नीको दुखाइ बढ्छ ?
जाडो समयमा हाडजोर्नी दुख्ने समस्या वर्षको अन्य मौसमहरू भन्दा बढी महसुस गरिन्छ। तर, चिसो महिनामा शरीरले अधिक तातोलाई जोगाइराख्न कोशिस गर्दछ, जसका कारण शरीरको मध्य भागमा अतिरिक्त रक्त प्रवाह हुने गर्दछ। मुटु, फोक्सो र पाचन अंगहरु जस्ता संवेदनशील अंगमा रक्त प्रवाह बढी हुने गर्दछ। फलस्वरूप, खुट्टा, घुँडा, पाखुरा काँध र अन्य जोर्नीहरुमा रगतको प्रवाह कम हुने गर्दछ। यसले जोर्नीमा रक्तनलीहरु संकुचित बनाउनुको साथै त्यस स्थानमा अत्याधिक पिडा र असहजता महसुस हुने गर्दछ।
यसैगरी, चिसो मौसममा शरीरले पर्याप्तमात्रमा सूर्यको किरण वा प्रकाश पाउँदैन, जसका कारण शरीरमा भिटामिन डीको स्तरमा कमी आउने गर्दछ। शरीरमा अपर्याप्त भिटामिन डीको स्तर भयो भने पनि मांशपेशी तथा हाडजोर्नीको दुखाइ बढ्ने गर्दछ। त्यसैगरी, एकाएक अत्यधिक तापक्रमको सम्पर्कमा आउँदा चिसोले सिधा शरीरको जोर्नीमा असर गर्न सक्दछ। जोर्नीका वरिपरि भएका कोशीकाहरुमा यसले रक्त प्रवाहमा बाधा पु¥याउँने गर्दछ।
जब, मौसम चिसो हुन्छ, वायुमण्डलीय चापमा आएको परिवर्तनका कारण पनि जोर्नीहरू दुख्ने र सुन्निने हुन्छ। स्नायु प्रणालीको संवेदनशीलता र न्यून रक्त संचारको कारणले पनि हाडजोर्नीको दुखाइ बढ्ने गर्दछ। जाडो मौसममा शरीरका विभिन्न अंगहरु दुख्ने तथा सुन्निने हुन्छ। तर. मुख्यतया चिसोले कम्मर, घुँडा र गोलीगाँठाहरूमा ज्यादा असर पुर्याउने गर्दछ। जसको एक मुख्य कारण भनेको जाडो मौसममा गरिने चरम व्यायाम ।
शरीरलाई स्वस्थ राख्न र जाडो मौसममा शरीरलाई न्यानो राख्न व्यायामको आवश्यक पर्दछ। तर, अतिरिक्त व्यायाम र दौडिने गर्दा शरीरको वजन थाम्ने अंगहरुमा भार बढ्ने गर्दछ र यसले जोर्नीहरुमा दवाब सिर्जना गर्नुका साथै जोर्नीहरु दुख्ने तथा सुन्निने समस्या निम्तिन सक्छ।
हाडजोर्नीको दुखाई कम गर्नका लागि यी हुन् सरल उपाय :
आफु बसेको परिवेश वा वातावरणको तापक्रम न्यानो राख्नुहोस्।
उचित र न्यानो कपडाले शरीरको अंगहरूलाई इन्सुलेट गर्नुहोस्।
यदि घुँडा दुख्ने समस्या छ भने नि क्याप वा कम्प्रेसन गार्मेट्सको प्रयोग गर्नुहोस्।
नियमितरुपमा हल्का शारीरिक व्यायामले पनि दुखाइलाई कम गर्न सक्छ।
हाडजोर्नीको दुखाई कम गर्न आफ्नो आहारमा प्रोटिन, क्याल्सियम, भिटामिन डी र सीको मात्रा बढाउनुहोस्।
जाडोयाममा शरीरमा पानीको कमी हुने गर्दछ, चिसोका कारण पर्याप्त पानी पिइँदैन। जसकाकारण शरीरमा सुख्खापन बढ्ने गर्छ ।
मिसावटविहीन तेलले शरीरमा मालिस गर्नाले पनि हाडजोर्नीको दुखाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
मांसपेशीहरु र हाडजोर्नीको दुखाइ कम गर्न वा आराम प्रदान गर्न हट ब्याग तथा अन्य तातो प्रदान गर्ने यन्त्रहरुको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
पौष २०, २०७७ सोमवार १८:४८:३६ बजे : प्रकाशित